မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း မှ စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ | MyJobs
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း မှ စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ
To provide front-line customer service. To work onaspecific project (a contract basis).
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။